Lahatsoratra nataon'i Alexandra Isenegger ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Alexandra Isenegger
Alexandra no CEO an'ny Linkilaw. Mila antontan-taratasy matanjaka ny fanombohana ary miakatra ny tahan'ny adala ny mpisolovava. Linkilaw dia manolo-tena hampitsahatra ny tsy fahaiza-miasa, manatsara ny serivisy ara-dalàna ary manampy ny asa ara-dalàna ho azo idirana. Amin'ny alàlan'ny teknolojia, vahaolana an-trano sy tsena ara-dalàna, dia manome fanombohana mialoha ny andiany B izahay miaraka amin'ny fanampiana ara-dalàna lehibe indrindra.
Alahady 30 aprily 2017 Alatsinainy, May 1, 2017 Alexandra Isenegger
Nifandray tanana foana ny fifandraisana sy ny fifanakalozana ara-barotra. Marina izany ankehitriny kokoa noho ny teo aloha, miaraka amin'ny fahazoantsika miditra tsy tapaka amin'ireo fitaovana an-tserasera, na amin'ny solosaina, na takelaka na finday. Vokatr'ity fidirana vetivety ity amin'ny vaovao, ny tranokalan'ny orinasa dia nanjary fitaovana lehibe ho an'ny orinasa hanaterana ny vokatra, serivisy ary kolontsainy amin'ny tsena lehibe kokoa. Ny tranonkala dia manome hery ny orinasa amin'ny alàlan'ny famelana azy ireo hahatratra sy hanatratra azy ireo